Igama ngalinye linencazelo yalo. Igama elithi Dima linciphisa ukusuka kuDmitry. Futhi kwenzeka kusukela kumaGreki "amademesari" asendulo, okusho ukuthi " okaDemeter," unkulunkulukazi wokuzala nomhlaba. Igama elithi Dima lisho ukuthini? Imfihlo yegama ihlale ithakazelisayo, ngakho ngeke kube yinto engafanele ukungena emlandweni. Mayelana noDmitri wenza ngisho namazwi! Isibonelo: "Kuze kube yilapho udonsa intombazane iwubuqili, futhi ngemuva kokudumisa uDmitr." Leli gama lihlobene neSabatha Lomzali, lapho oshonile ekhunjulwa.
Dima - leli gama liboshwe abafana abanempilo encane kakhulu. Njengengane, bavame ukugula, hhayi ukubekezelela umkhuhlane omkhulu. Ngaphandle, uDima ufana kakhulu nonina. Uthanda ukukhuluma ngezihloko ezahlukene ezingafani, futhi uthanda ukuphikisana. Akukhona ukuthi uyayidinga ngempela, kepha uma evikela umbono wakhe, ngeke alalele noma ubani, ngisho noma kungalungile. U-Dima akahambisani neze, uhlale ephikelela. Noma kunjalo, ukukhulumisana nalomuntu akulula nje - kuyathandeka futhi. Abangane ngokushesha bajwayele izimfanelo zakhe - enenkani nokungahambisani nalokho, futhi bayagxeka kuphela.
Izindinganiso zokuziphatha? Igama elithi Dima linikwa abaningi babo. Lo muntu unzima kakhulu futhi uyashesha, angakwazi ukuqhuma kalula. Kunzima ukuxhumana naye. I-Dima iphikelela, ihlakaniphile futhi ihlakaniphile, ingesabi umsebenzi futhi isebenza kanzima. Ozakwethu kulokhu kubaluleka komuntu kanye nokukwazi ukubhekana nakho ngokwanele noma yiziphi izinselelo. Ngenxa yalokho - uDmitry uhambela phambili emkhakheni wezemisebenzi, ikakhulukazi ephumelela emisebenzini, lapho udinga ukuxhumana nabantu.
Indoda okuthiwa uDmitry idinga induduzo, induduzo, abesifazane abathandekayo, kanye nezinye izinjabulo. Ngokuqondene nencazelo eyinhloko - igama likaDima ligujwa yibo bantu abangathandi ukuzikhawulela kunoma yini. Ngezinye izikhathi abanye bayakubona njengobungqingili. Uma u-Dmitry uzoxhuma impilo yakhe nentombazane, khona-ke kuphela kuphela ozokwenza konke kumnandi. Kumele kuqashelwe ukuthi akunamsebenzi ukubiza izintaba, ukuhamba noDmitry. I-firefire, igubhu, itende, zonke izinhlobonhlobo nezinkomishi zetiyi elishisayo - akuyona yona. Udinga induduzo - futhi lezi zokudlela ezibizayo kanye nombhede okhululekile. Dima - leli gama lingomuntu onesibindi, othakazelisayo nangesinye isikhathi ononya. Uma ezimisele ukulwa, akacabangi ngemiphumela engenzeka, okuvame ukujeziswa yiyo.
Ngifuna ukuphawula ezinye izincazelo ezithakazelisayo: Igama likaDima linalo ngokugcwele. Ungumuntu onomusa kakhulu. Angasuswa kakhulu ngomzwelo omusha wokuthi uzoqeda ubudlelwane bakhe bangaphambilini ngaphandle kokuzisola okukhethekile futhi aqale amasha. Kodwa-ke, ngisho noma lo muntu enomshado wesibili, uzobe enamathele kakhulu kumntanakhe kusukela kwangaphambili. Uzonakekela izingane kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakhe.
Umfazi kuzodingeka abhekane neqiniso lokuthi umyeni wakhe uyisikhubekiso. UDmitriev uthonywa kakhulu ngumama wakhe. Futhi ezinye izincazelo ezisele: Igama likaDima liboshwe abantu ababa nomona olinganiselayo futhi abahlukumezi ukuphuza (ngaphandle kokushiseka). Ubuhlobo obuhle kakhulu noDmitry bazosebenza no-Anna, uLily, Natalia, Lesya no-Yana. Kodwa-ke, noVictoria, Agnes, Marina, Julia noSophia akukho lutho olukhanyisela kuye - lawa magama awahambisani.
I-Cancer ne-Aries Ukuhambisana Ngothando: Injabulo Eqotho
Izinkemba Ngokhuni nezihlangu ngiyoqeqeshwa. Indlela yokwenza inkemba ngokhuni?
Okuhlobisa usimende izindonga ngezandla siqu sakhe, ukulungiswa